Funga Maropafadzo - Thomas S. Monson
Musangano MukuruMusangano UchangopfuuraMisangano Yose
NaMutungamiri Thomas S. Monson
Baba vedu Vokudenga vanoziva zvidikanwi zvedu uye vanozotibatsira apo tinokumbira rubatsiro kwaVari.
Mabhuratha namasisita angu anodikanwa, musangano mukuru uno unosvitsa makore makumi mana nemapfumbamwe kubva pandakatsigirwa, musi wa 4 Gumiguru, 1963, senhengo yeChikwata cheVaapositori vane Gumi neVaviri. Makore makumi mana nemapfumbamwe inguva yakareba chaizvo. Nenzira dzakawanda, zvisinei, nguva inoratidzika sedikidiki kubvira pandakamira papodhiyamu muTarbenakeri ndikapa nhaurwa yangu yokutanga pamusangano mukuru.
Zvizhinji zvakachinja kubvira 4 Gumiguru, 1963. Tirikurarama munguva yakasiyana zvikuru nedzimwe nguva munhoroondo yenyika. Takaropafadzwa nezvakawanda zvikuru. Asi dzimwe nguva zvakaoma kutarisa matambudziko nemadiro arikuitwa pahunhu zvakatikomberedza tisingaoremwoyo. Ndakaona kuti, pane kungofunga zvinetso nguva dzose, kana tikarisa shure tikafunga maropafadzo ari muupenyu hwedu, kusanganisira ayo maropafadzo anotaridzika semadiki uye dzimwe nguva atisingaoni, tinokwanisa kuwana rufaro rukurusa.
Apo pandakawongorora makore makumi mana nemapfumbamwe apfuura, ndakawana zvinhu zvakawanda. Chimwe ndechekuti zviitiko zvisingaverengeki zvandakava nazvo zvakanga zvisiri izvo munhu zvaangatora sezvinhu zvinoshamisa. Chokwadi ndechekuti, panguva yazvaiitika, kazhinji zvaitaridzika sezvinhu zvisingakatyamadzi uye kunyangwe zvinoitika mazuva ose. Asi, kana ndichitarisa shure, zvakanatsa nokuropafadza upenyu – kunyangwe nehwangu pachangu hwakaropafadzwawo. Ndinokukurudzirai kuti muiite zvimwechetezvo – kureva kuti muwongorore upenyu hwenyu uye mutsvake chete maropafadzo, makuru nemadiki, amakatambira.
Chakasimbisiswa nguva dzose munguva yokuwongorora kwangu makore aya chaiva ruzivo rwangu rwekuti minamato yedu inonzwikwa nokupindurwa. Tinoziva chokwadi chinowanikwa muna 2 Nifai muBhuku raMormoni: “Vanhu varipo, kuti vave norufaro.” 1 Ndinopupura kuti ruzhinji rwerufaro irworwo runouya apo tinoziva kuti tinokwanisa kutaurirana naBaba vedu Vokudenga kuburikidza nemunamato uye kuti minamato iyoyo inozonzwikwa nokupindurwa – zvimwe kwete nenzira uye nenguva yatinotarisira kuti ipindurwe, asi inopindurwa uye naBaba Vokudenga vanotiziva nokutida zvakarurama uye vanoda rufaro rwedu. Havana here kutivimbisa kuti, “Iva wakazvininipisa, uye Ishe Mwari vako vachakutungamirira neruoko, uye nokukupa mhinduro kuminamato yako.”? 2
Mumaninetsi mashoma anotevera andakatarirwa, ndinoda kugoverana nemi muenzaniso mudikidiki chete wezviitiko zvandakava nazvo umo minamato yakanzwikwa nokupindurwa uye izvo, mukutarisa shure, zvakaunza maropafadzo muupenyu hwangu pamwechete nemuupenyu hwevamwe. Jenari rangu randinonyora zuva roga roga, iro randachengeta mumakore ese aya, rabatsira kundipa zvimwe zvinhu zvandingaida ndisina kukwanisa kuyeuka dai ndisinaro.
Mukutanga kwegore ra1965, ndakapiwa basa rokupinda misangano yemasiteki uye nokuita mimwe misangano munharaunda yose yeSouth Pacific. Iyi ndiyo yaiva nguva yangu yokutanga kushanyira nzvimbo iyoyo yepanyika, uye yaiva nguva isingambofi yakakanganikwa. Zvizhinji zvakanga zviri zvomweya pamamiriro zvakaitika panguva yebasa iri apo pandaisangana nevatungamiri, nhengo, nevashumiri.
Musi weMugovera neSvondo, waNdira 20 na 21, takanga tiri muBrisbane, Australia, kunoita misangano yekonifarenzi yeSiteki yokuBrisbane. Panguva yemisangano yeMugovera, ndakasumwa kumutungamiri wedunhu aibva munharaunda yaiganhurana neyataiva tiri. Apo pandakamumhorosa neruoko, ndakava nemanzwiro akasimba okuti ndaifanira kutaura naye uye kumupa rairo, saka ndakamukumbira kuti andiperekedze kumusangano wemangwanani eSvondo zuva raitevera kuitira kuti izvi zvikwanisike kubudirira.
Mushure memusangano weSvondo, takava nemukana wekukurukura pamwechete. Takataura nezve mabasa ake akawanda semutungamiri wedunhu. Apo pataidaro, ndakanzwa kuti ndaifanira kumupa mamwe mazano maererano nebasa roushumiri uye mapiro aangaita iye nenhengo dzake rubatsiro kuvashumiri venguva dzose mumabasa avo munharaunda yake. Pashure ndakazodzidza kuti murume uyu akanga achinamatira hutungamiri panyaya iyi. Kwaari kushanya kwedu kwaiva uchapupu hwakakosha hwekuti minamato yake yakanga yanzwikwa uye yapindurwa. Uyo waitaridzika semusangano usingashamisi asi uyo wandiine chokwadi kuti wakatungamirirwa neMweya uye uyo wakaunza shanduko muupenyu nebasa zvemutungamiri wedunhu uyu, muupenyu hwenhengo dzake, uye mukubudirira kwevashumiri ikoko.
Mabhuratha nemasisita angu, zvinangwa zvaIshe kazhinji zvinozadzikiswa apo tinoteerera kunhungamiro yeMweya. Ndinotenda kuti apo patinonyanya kutevera kukurudziro nefemero dzinouya kwatiri, Ishe Vanozonyanyawo kupa kwatiri mabasa Avo.
Ndakadzidza, sokutaura kwandakaita mune dzimwe nhaurwa, kuti usambofa wakanonokera femero. Pane imwe nguva makore mazhinji apfuura, ndaishambira muduhwino remuDeseret Gym muSalt Lake City apo pandakanzwa femero yokuenda kuUniversity Hospital kunoshanyira shamwari yangu yakanaka uyo akanga arasikirwa nekushanda kwemitezo yake yezasi nokuda kwechirwere chegomarara uye nekuvhiyiwa kwakatevera. Pakarepo ndakabuda muduhwino, ndokupfeka, uy